Iculo likaMgarimbe libuye ngamandla | News24
Iculo likaMgarimbe libuye ngamandla
Isithombe sevidiyo ye #SisterBettinaChallenge.
UMCULI we-Kwaito uMgarimbe owaduma ngengoma eyaziwa ngokuthi i-Sister Bettina eyashisa izikhotha eminyakeni eyishumi edlule uthe umkhankaso owaziwa ngokuthi #SisterBettinaChallenge osabalale ezinkundleni zokuxhumana kuleli uyamujabulisa.
Iculo elithi Sister Bettina, elakhishwa ngonyaka ka-2006, livuselelekile entsheni yakuleli njengoba belihamba phambili emasontweni adlule.
Abantu abasha abaningi bebe faka amavidiyo abo ezinkundleni zokuxhumana bedansela lengoma.
Yize iningi labantu belingazi ukuthi konke lokhu kuqale kanjani kodwa besilokhu sikhupha isibalo sabantu ababe yingxenye yalomkhankaso iningi labo benza amavidiyo ahlekisayo ngemuva kube kudlala lona leliculo.
Amavidiyo aphetha ngokuthi umuntu osuke exoxa indaba kuyona kanye nabantu abasuke bemulalele badansele yona lengoma.
Kwamanye amavidiyo kuvela abafundi basenyuvesi benake umsebenzi wabo kodwa begcine bephazamiswe iyona lengoma.
Kwenye ividiyo kuvela iqembu labafundi lilwa kodwa impi yabo imiswe ukugena kwayo ingoma ka-Mgarimbe.
Abafundi besikole samabanga aphekeme saseThekwini bavela bedansela yona lengoma kwenye yamavidiyo, kanti kuthi kwenye kuvela ingane encane evuka ebuthongweni iqale idanse uma sekudlala lona leliculo.
Ngokusho kwabantu ababe yingxeye yalomkhankaso, akulula ukuzibamba ungadansi uma kudlala leliculo. UMgarimbe, igama lakhe okungu Nkosinathi Mfeka, udabuka eThekweni.
Kwinxoxo abenayo nephephandaba i-Witness uMgarimbe uthe kuyamujabulisa ukubona ukuthi iculo lakhe selibuye laduma futhi.
“Kuyangijabulisa ukuthi abantu basungule lomkhankaso ngengoma yami. Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi noma sekudlule iminyaka eyishumi lakhishwa leliculo kodwa abantu basalithanda, kuyakhombisa ukuthi lisazoba khona isikhathi eside leliculo,” kusho uMgarimbe.
Uthe ezinkundleni zokuxhumana abantu bafake isicelo sokuthi leliculo lithole umklomelo wokuba yiculo elihlula zonke izingoma eminyakeni eyishumi eyedlule.
Uqhube wathi selokhu kuqale lomkhankaso sekuvele amathuba amaningi okuthi ezocula esiteji.
Kodwa uthe into emuphathe kabi ukuthi abantu abamumema ukuthi ezocula esiteji bafuna acule i-Sister Bettina kuphela agcine engalitholanga ithuba lokucula izingoma zakhe ezintsha.
Uma ungakaze uwabone lamavidiyo landela le-hashtag #SisterBettinaChallenge.